You are at:Home»NHAU DZEVARIMI»Kurima magaka ePrime Seed Co
By Munyori weKwayedza on	 October 6, 2017 · NHAU DZEVARIMI
Magaka eOlympian ihybrid zvakare achirimwa mumunda uye anowanikwa kuPrime Seed Co chete. Magaka aya anotandawo zvinoyevedza uye anopa goho repamusoro. Magaka eOlympian anoibva pakati pemazuva makumi mashanu kusvika pamazuva makumi mashanu nemashanu (50-55days). Magaka acho akasvibirawo zvinoyevedza. Anoreba kusvika 22cm uye akakora zve 5cm.
Pamafetireza, varimi vanokurudzirwa kuti ivhu ravo ritange raongororwa. Varimisi vePrim Seed Co vanokurudzira kushandisa fetireza yeCompound D inosvika 600-750kg/ha. Fetireza yepamusoro yeAmmonium Nitrate inokurudzirwa kutanga kuiswa mushure memavhiki maviri kubva magaka amera inoita 50kg/ha. Mushure mazvo, AN inoramba ichiiswa mushure memavhiki maviri ega ega kusvika panotanga kubereka magaka.
… Elizabeth Benjamin murimisi kuPrime Seed Co.
Kuriritira zvirimwa zveZhizha